Iphaneli yoMlawuli weAlarm yerhasi abavelisi kunye nababoneleli-China
I-AEC2301a Umqondiso we-Alarm ye-Alarm yegesi evuzayo
Iiseti ezine zothumelo lwe-loop yebhasi, iindawo zokubeka iliso ezingama-256, inkqubo eyomeleleyo yokuchasana nokuphazamiseka, ulawulo lwezahlulo, iingcingo ezingabizi kakhulu, ufakelo olufanelekileyo nolusebenzayo;
7 "Isisombululo esiphakamileyo se-LCD yombala wokwenyani, efana nenkqubo yokusebenza yeWindows, ilungile kwaye isebenza kakuhle kwimenyu, ixesha lokwenyani ukubonisa ulwazi lwe-alam, ulwazi olungaphumeleliyo, ugxininiso kwii-detectors, njl. njl., iintlobo zegesi eziboniswe ngesiTshayina, ukusetwa kwasimahla izikhundla ze-alamu, umbuzo wenkqubo efanelekileyo kunye nokugcinwa;
Ukusetwa kwamahhala kwamanqanaba amabini e-alamu kunye neentlobo ezintathu ezothusayo (ukunyuka / ukuwa / inqanaba ezimbini) ukuphucula umsebenzi wokubeka iliso;
Imemori eyomeleleyo: iirekhodi zembali zeerekhodi ze-1,000 zamva nje, iirekhodi ze-1,000 ezothusayo kunye neerekhodi ze-100 zokuqalisa / ukuvala, ezingayi kulahleka xa kwenzeka ukuhluleka kwamandla;
Umlawuli weAlarm yegesi AEC2303a
Ukuhanjiswa komqondiso webhasi, inkqubo eyomeleleyo yokuchasana nokuphazamiseka, i-wiring eneendleko ezifanelekileyo, ukufakwa okulula kunye nokusebenza kakuhle;
Ixesha lokwenene lokuxinana kwerhasi (%LEL) ujongano lojongano okanye ujongano lokubonisa ixesha olukhethwa ngumsebenzisi;
Iqhosha elinye-isiqalo sokugunyaziswa kwenkqubo elula kunye efanelekileyo;
Ukumisela ngokukhululekile amaxabiso e-alamu amanqanaba amabini othusayo kwinqanaba elipheleleyo;
AEC2305 IsiLawuli seAlarm yegesi encinci
Ukuhanjiswa komqondiso webhasi (S1, S2, GND kunye +24V);
Isiboniso soxinaniso sexesha lokwenyani esitshintshayo okanye isiboniso sexesha, ukujonga iigesi ezitshayo kunye nemiphunga;
Amanqanaba amabini othusayo: I-alamu ephantsi kunye ne-alamu ephezulu, kunye nexabiso le-alamu elinokulungiswa;
Ukusetyenzwa kweempawu ze-alam kunokubaluleka ngaphezu kokusetyenzwa kwemiqondiso engaphumeleliyo;
Umlawuli weAlarm yegesi AEC2393a
I-19” ye-3U eqhelekileyo efakwe kwiphaneli ye-rack yentsimbi yonke ine-slideway plug-in design kwitshaneli nganye;umgangatho wokufakelwa kwekhabhinethi ye-3U ibonakala ngokufakela okulula, umthamo omncinci (73% we-AEC2392a) kunye nokuphazamiseka kwe-anti-EMI / RFI;
Ikhadi lokulawula eliyintloko kunye namakhadi etshaneli abekwe ngokwahlukeneyo kodwa anomsebenzi wokubonisa ukuvumelanisa.Ngesikrini esikhulu se-LCD saseTshayina, ikhadi lokulawula elilawulayo linokuqonda ukusebenza kwemenyu yaseTshayina kunye nomboniso okhawulezayo nolula kunye nokusebenza;
Amakhadi amatshaneli angasebenza ngokuzimeleyo phantsi kwemenyu ezimeleyo.Ngaloo ndlela, ukungaphumeleli kwekhadi lokulawula i-master okanye ukungaphumeleli kwamanye amakhadi esiteshi akuyi kuba nefuthe ekubekweni kwegesi kwamakhadi aqhelekileyo;
Amakhadi eChannel anokufumana i-4-20mA yesignali okanye igalelo lokutshintsha ixabiso lokutshintsha kwaye adibaniswe nezixhobo ezahlukahlukeneyo, kubandakanywa i-gas detectors evuthayo, i-gas detectors enetyhefu kunye neyingozi, i-oxygen detectors, i-flame detectors, i-smoke / i-heat detectors kunye namaqhosha othusayo, njl.
Umlawuli weAlarm yegesi AEC2392b
Ukuhlangabezana nesidingo sokudibanisa i-4-20mA esemgangathweni yangoku i-detectors yesignali kwiindawo ze-1-4 zamanqaku;
Ngobukhulu obuncinci, imveliso inokufakwa eludongeni ngokulula.Iiseti ezimbini okanye ngaphezulu zinokufakelwa ecaleni ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zabathengi zeendawo ezingaphezulu zamanqaku (ukufakwa eludongeni kwe-8, 12, 16 okanye iindawo zamanqaku angaphezulu kunokuphunyezwa ngokudityaniswa kwe-gapless);
Ukubeka iliso kunye nokuboniswa koxinzelelo lwexesha lokwenyani (% LEL, 10-6, %VOL) kunye nokutshintsha iimpawu zexabiso lerhasi etshayo, igesi eyityhefu kunye neoksijini (esihlala sihleli sisichongi serhasi etshayo. Akukho setingi ifunekayo. Iyafumaneka ukuze isetyenziswe. emva kokufakwa nokufakelwa kombane);
I-AEC2392a-BS/BM Umlawuli weGesi
Ukuhanjiswa komqondiso wenkqubo yeentambo ezintathu;udonga olufakwe eludongeni;ukuphazanyiswa kwe-anti-RFI/EMI;
Le mveliso inembonakalo entle kunye nobukhulu obuphathekayo, izixhobo ezininzi zinokufakwa eludongeni kunye;
Ikhadi lokulawula eliyintloko kunye namakhadi etshaneli asetwe ngokwahlukeneyo kunye nomsebenzi wokubonisa ohambelanayo.Ikhadi lokulawula i-master line-Large LCD yaseTshayina yokubonisa isikrini, ingaba yi-Chinese menu operation, ibonise kwaye isebenze ngokukhawuleza kwaye kulula;
Iintlobo ezininzi zemveliso zamakhadi ejelo ziyasebenza kunxibelelwano lwezixhobo zolawulo lwangaphandle ezikwisiza.Ngokusebenzisa imodyuli yonxibelelwano eqhelekileyo yeMODBUS, umsebenzi wonxibelelwano weRS485 unokunxibelelana nekhompyuter yenginginya (umz. DCS/PLC/EDS/RTU, njl.);
I-JB-ZX-AEC2252B Ibhokisi yokudibanisa ivalve ye-Solenoid
Ibhokisi yokudibanisa ivalve ye-Solenoid inokudityaniswa nezixhobo zokulawula ze-ACTION ukulawula nokulawula iindidi ngeendidi zeevalvu ze-solenoid.
Ibhokisi yokudibanisa i-JB-ZX-AEC2252F Fan
Ibhokisi yonxibelelaniso lwabalandeli inokudityaniswa nesixhobo sokulawula i-ACTION ukulawula nokulawula iindidi ngeendidi zeevalvu ze-solenoid.
IValve yeSolenoid yoShishino DN25-DN200
Ubungqina bokudubula obufihliweyo: akukho ntlantsi, izinzile kwaye inokuthenjwa;
Imodi yokuvula iValve: ukusetha kwakhona ngesandla, ukuphepha ingozi;
Imo yogcino: ukusebenza ngokuzinzileyo njengoko ivalve ivuliwe okanye ivaliwe (okt i-bi-stable state);
Isantya sokuvala: ukucima ukunikezelwa kwegesi ngaphakathi kwe-1s;
Ukuvalwa xa kukho ukushukuma ngamandla;ivelufa inokuzivala ngokuzenzekelayo xa kukho ubundlobongela obunobundlobongela;
Ukukhutshwa koxinzelelo oluzimeleyo: kwimeko yomehluko omkhulu woxinzelelo phambi nangemva kwevalve, ivalve inokuvulwa emva kokuba ivalve yokukhutshwa koxinzelelo ivuliwe.Ngaloo ndlela, i-petroli yegesi ayiyi kukhutshwa emoyeni, isusa iingxaki ezifihlakeleyo zokhuseleko;
Isikhangeli segesi se-lpg, isixhobo segesi, IAlam yerhasi etshayo, umtshini wegesi onokutsha, China Gas Detector, umtshini wegesi osisigxina,